Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Amarillo ee gobolka Texas oo guddi cusub dooratay
Jaaliyadda Amarillo ee gobolka Texas oo guddi cusub dooratay
Posted by ONA Admin	/ May 22, 2011
Jaaliyada Ogaadeeniya ee magaalada Amarillo ee gobolka Texas ayaa maanta oo Sabti ah taariikhduna tahay 05/21/11 isugu timid shir balaadhan oo si heersare ah loosoo abaabulay.
Shirkan oo ujeedadiisu ahayd in lagu doorto dhismaha guddida jaaliyada ayaa waxaa ka soo qaybgalay dadweynihii loogu talagalay oo aad u xiisaynayay in ay ka qaybqaataan ama ay goobjoog u ahaadaan doorashada guddida Jaaliyada Ogaadeeniya ee magaalada Amarillo Texas.
Shirka jaaliyadda oo uu goobjooge ka ahaa Wakiilka gobolada Galbeedka mudena Axamad A. Yusuf ayaa wadatashi dheer ka dib waxaa halkaas lagu doortay guddi ka kooban todoba (7) xubnood oo uu gudoomiye u yahay mudane Axmed Sheekh bille oo ku magac dheer Jeexow. Mudane Axmed Jeexow iyo xubnihii kale ee guddida ayaa balanqaaday in ay dadaal dheer u galidoonaan sidii ay u gudan lahaayeen xilka loo doortay dardar horlehna u galin lahaayeen howlaha jaaliyada ee gobolka Texas gaar ahaan magaalada Amarillo iyo nawaaxigeeda.
Dhinaca kale waxay jaaliyadu hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyeen Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya oo iyagu dhiigooda qaaliga ah u huray sidii ay uga dulqaadi lahaayeen heeryada gumaysiga Itoobiya shacbiyaga Ogaadeeniya.
Sidookalena waxay jaaliyadu cadaysay in ay taageero hiil iyo hooba la garab taaganyihiin CWX Ogaadeeniya iyo guud ahaanba shacbiga dulman ee reer Ogaadeeniya.
Ugu dambayntiina waxay Jaaliyadu cambaareyn xoogleh u soojeediyeen ciidanka cabudhiska gumaysiga Itoobiya oo sidii caadada u ahayd beryahan bambe xasuuq iyo dil aan kala sooc lahayn kawada guddaha Ogaaadeeniya.
maa shaa allaah, waa tallaabo wanaagsan,
guulaysta reer Texas siina giijiya